ICG; "Siyaasiyiinta Soomaaliya waxay mar kale ku ciyaaraan Dab" - Jowhar somali news leader
By Mahad	 On Sep 15, 2021
Hay’ada International Crisi Group ayaa digniin ka soo saartay xaalada siyaasadda ee ka jirta dalka Soomaaliya iyadoo ugu baaqday Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo taageerayaashiisa inay isku dayaan in xil ka qaadis ku sameeyaan Ra’iisul Wasaare Rooble.
Warbixin ay soo saartay hay’ada ayaa waxaa ay ugaga hadashay marxaladihii uu soo maray khilaafka ka dhexeeya Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
“Dadka qaar ayaa ka welwelsan in madaxweynuhu ka codsado saaxiibkiisa, Guddoomiyaha Aqalka Hoose, Maxamed Mursal Cabdirhaman, inuu ku baaqo in cod loo qaado mooshinka xil ka qaadista Rooble. Tallaabo kasta oo xilka looga qaadayo Rooble waxay noqon doontaa mid aad loogu murmo, marka la eego doorkiisa dhexe ee diyaarinta doorashooyinka.”ayaa lagu yiri warbixinta.
Hay’adda ayaa shaki gelisay sharci ahaanshaha haddii Farmaajo uu qaado tallaabo uu golaha shacabka xilka uga qaadayo Rooble.
“Dadka qaar ayaa ku doodaya in tallaabada noocan oo kale ah ay sidoo kale noqon doonto mid sharci ahaan shaki ku jiro marka la eego in muddadii baarlamaanku ay dhammaatay December 2020. Intaa waxaa dheer, wakiilada cusub ee aqalka hoose weli lama dooran, xitaa iyadoo qaar ka mid ah mudanayaasha cusub ee la soo xulay ay kuraastooda qaateen.”
Hay’adda ayaa warbixinteeda ku xustay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu haatan awood u leeyahay maamulka maaliyadda dalka Soomaaliya.
Hay’adda ayaa warbixinteeda sidoo kale ku sheegtay in loo baahan yahay in cunaqabatayn lagu soo rogo madaxda khilaafka mas’uulka ka ah, sidoo kale hay’ada ayaa waxaa ay ka hadashay kiiska Ikraan Tahliil.
“Madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa waa inay ka fogaadaan dadaal kasta oo lagu ridayo ra’iisul wasaaraha si aysan u carqaladeyn diyaarinta doorashada. Jilayaasha kale ee siyaasadda, oo ay ku jiraan xubnaha mucaaradka, inkasta oo ay markii hore shaki ka qabeen, haddana waxay si isa soo taraysa u muujiyeen kalsoonida wakiilnimada Rooble ee diyaarinta.”
“Ka takhalusidda Rooble waxay dib u cusboonaysiin doontaa shakigooda waxayna u badan tahay inay burburiso heshiiskii ay doorashadu ku salaysnayd. Madaxweynuhu waa inuu ku dhaganaadaa ballanqaadkiisii ​​hore ee ahaa inuu ixtiraamo hadal ahaan iyo ficil ahaan awoodda ra’iisul wasaaraha ee maaraynta saadka iyo amniga galaya codbixinta.”
Hay’adda ICG ayaa warbixinteeda ku sheegtay in ay tahay in Farmaajo uu aqbalo magacaabista Roble ee madaxda NISA.
“Sidaas darteed, Farmaajo waa inuu aqbalaa ra’iisul wasaaraha inuu u magacaabo inuu maamulo NISA oo uu joojiyo inuu ka hortago tallaabo kasta oo uu qaadayo. Rooble, markiisa, wuxuu dib u eegi karaa inuu hore u sii socdo iyada oo wareegga doorashada ee tartiib -tartiib u soconaya ahmiyaddiisa ugu weyn.”
“Beesha caalamka waa inay diyaar u yihiin inay magacaabaan kuwa u dhaqma sidii qaswadayaal, ugu hanjabaya cunaqabateyn haddii aysan wax ka beddelin wax -ka -qabashada oo aysan diyaarin tillaabooyin la beegsanayo, oo ay ka mid yihiin xannibaadyo socdaal ama xayiraad hantiyeed, oo ka dhan ah kuwa ku adkeysanaya falalka wax u dhimaya xasilloonida Soomaaliya iyo rajada laga qabo inay gaaraan doorasho degdeg ah. ”
“Mareykanka, UK iyo Midowga Yurub gaar ahaan waa inay hormuud ka noqdaan arrintan, marka la eego taageerada weyn ee ay siiyaan dowladda Soomaaliya. Inta badan dadka siyaasadda ku xeel dheer ee Soomaaliya waxay haystaan ​​laba dhalasho, iyo tallaabooyin laba geesood ah oo xaddidaya socdaalkooda ama xorriyaddooda maaliyadeed, oo ay ku jirto ka dib markii ay xafiiska joogeen, waxay soo rogaan kharash cad oo u noqon kara ka hortag wax ku ool ah.”
“Marka laga hadlayo lumitaanka Ikran, baaritaanka uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waa inuu sii socdaa oo aan la hor istaagin.
“Xafiisku waa inuu soo bandhigaa wixii ka soo baxa, oo uu la xisaabtamo kuwa masuulka ka ah. Qoyska Ikran ayaa la sheegay inay durba diideen diya (dhaqanka Soomaalida ee ah in magdhaw la siiyo qoyska dhibanaha si loo xaliyo eedeymaha khaladka) taas beddelkeeda la joojiyo baaritaanka. Waxa kale oo ay ka soo horjeesteen guddi baarayaal ah oo uu Farmaajo magacaabay 13 -kii September. Jawaabtoodu waxay muujinaysaa inaysan aqbali doonin habab kale oo caddaalad ah.”
“Soomaaliya waxay ku jirtey mugdi dheer oo ku filan iyadoo dowladdu ay dhaaftay waqtigii loo idmaday laakiin aan weli qabanqaabin doorasho cusub. Isku dhacyada u dhexeeya labada hoggaamiye ee ugu sarreeya waxay halis ugu jiraan inay sare u qaadaan xasilloonida uu dalku ku naaloonayo iyadoo laga weecinayo siyaasiyiinta mudnaanta kale, oo ay ka mid tahay bixinta adeegyada Soomaalida. Dhammaan hawlwadeennada gudaha waa inay dejiyaan si looga hortago fidista khilaafka Farmaajo-Rooble.”
Costa Rican President Says Climate Change Is ‘This Generation’s…
The ‘neglected crisis’ in the English-speaking regions of…